PFM VS Zirconia: Kedu ihe nke ka mma? -News-VSmile Co., ltd
PFM VS Zirconia: Kedu ihe dị mma?
Oge: 2021-01-08 ikwu:71
Site na mmepe nke teknụzụ CADCAM, zirconia ghọrọ ihe ama ama na ọ na - emeziwanye arụmọrụ ma na - eme ngwa ngwa ngwa ngwa, ọtụtụ ụlọ nyocha kwụsịrị ime PFM ugbu a.
“Imewe, spruing, tinye ego, ike ọgwụgwụ, devesting, metal gụchara, oxidizing, ikuku brading, opaquing 2x si, stacking poselin, na-agbakwunye na, gụchara, staining, glazing wdg ....... kwa-ewe oge, ha ' Anụrụla onye nyocha ụlọ nyocha "nke Aaron kwuru" Ọ bụghị ọdịnihu ma ewezuga ha, ụlọ nyocha anyị nwere ike ịka mma ".
O doro anya na, dịka onye na-emepụta ihe cadcam eze, anyị na-akwado zirconia karịa PFMs, mana gịnị ka ị ga-eji maka mweghachi ma ọ bụrụ na ịnweghị igwe, nyocha, ndị na-ebi akwụkwọ, na teknụzụ ndị ọzọ dị oke ọnụ? Azịza ya ga-abụ PFM nke nwere ike ịme nka nwere usoro dị ọnụ ala ma na-agwụ ike.dị ka ọ dị n'Africa ma ọ bụ n'ọtụtụ mba ndị ọzọ, ahịa PFM ga-adị mgbe niile.
Poselin-gwakọtara-na-metal okpueze (PFMs) ejiriwo nke ọma mee ihe ruo ọtụtụ afọ, na-enye ndị dọkịta nwere ntụkwasị obi, na-atọ ụtọ nke ọma, ma na-adịte aka. Otú ọ dị, n'ime afọ ole na ole gara aga, ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị dọkịta na-ahọrọ mweghachi zirconia. Ọnụ ọgụgụ nke Okpueze PFM nke ndị dọkịta na-arịọ dị obere ma e jiri ya tụnyere mweghachi seramiiki na zirconia niile. Fọdụ dentists jiri zirconia ma ọ bụ ihe niile seramiiki mweghachi fọrọ nke nta ka naanị, karịsịa mgbe Iweghachi naanị otu unit. Ntughari site na otu ihe gaa na nke ọzọ adịtụwo ngwa ngwa, ya mere, ọ dị obere nnyocha dị ogologo oge na ntụkwasị obi nke mweghachi zirconia. Site n'iji ya tụnyere, ejirila PFMs nke ọma ihe karịrị afọ 60, a tụlewo njigide ha n'ọtụtụ ebe.
Akụrụngwa ejiri rụpụta okpueze PFM
N'ozuzu, e nwere ụdị atọ dị iche iche nke allol eze eji mee ihe mgbe ha na-echepụta okpueze PFM: ndị na-abụghị ndị dị oké ọnụ ahịa, ndị dị oké ọnụ ahịa, na ndị dị elu. A na-akpọ alloys ndị na-adịghị oké ọnụ ahịa mgbe ụfọdụ ihe ndị nwere isi na ọla dị mma nke na-erughị 25%. Ọla ndị a na-enwekarị pasent buru ibu nke cobalt, nickel, chromium, ma ọ bụ beryllium. Ngwongwo ndị dị oké ọnụ ahịa nwere ma ọ dịkarịa ala 25% ọdịnaya dị mma. Ngwongwo ndị dị oké ọnụ ahịa nwere ihe karịrị 60% ọdịnaya dị mma nke gụnyere ọlaedo, platinum, ma ọ bụ palladium. Ngwongwo metal dị oké ọnụ ahịa nwere ọlaedo 40%. A na-eji ihe eji edozi mmiri eme ihe na ngwongwo feldspathic.
Ihe eji emeputa okpueze Zirconia
Nhọrọ maka okpueze zirconia gụnyere Zirconia HT ST, Zirconia UT, Zirconia Nga Shaded na Zirconia Layered. Zirconia Solid bụ monolithic na ọ bụ ihe kachasị ike dị. Ọ dị mma karịsịa maka ndị ọrịa nwere nsogbu ọgbụgba ma ọ bụ na-egweri ma ọ dabara adaba maka okpueze na-esote na akwa. A na-eme Zirconia UT site na ihe siri ike karịa nke PFM mweghachi mana ọ ka nwere translucency sitere n'okike yana ezigbo esthetics. O zuru oke maka okpueze dị n'ihu na akwa mmiri ruo nkeji 3. Zirconia Layered bụ ihe ọzọ siri ike nke kwesịrị ekwesị maka akwa na okpueze. Ihe omuma ya bu zirconia nke nwere ihe eji eme ya ma yie PFM.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ PFM?
Edere ntụkwasị obi nke mweghachi PFM nke ọma, ma etinyela ọtụtụ nde mweghachi n'ụwa niile. A maara PFM ka ọ dịruo afọ 30 mgbe ejiri ya mee ihe n'ọnọdụ ziri ezi yana iji ịdị ọcha nke onye ọrịa.
Njirimara nke mweghachi PFM:
· PFMs dị strong ma dị mma maka ojiji n'akụkụ niile ọnụ na n'ọtụtụ ọnọdụ ahụike
· Egosipụta ihe ịga nke ọma n'ụlọ ọgwụ nke mweghachi PFM site na nyocha ogologo oge
· Clinical research egosila na okpueze PFM di na otu ga adigide ruo otutu afo, onu ogugu PFM nke ato nwere otutu ndu.
· PFM okpueze na àkwà mmiri na-enye ezigbo esthetics, karịsịa n'oge afọ ole na ole mbụ
· Enwere ike iji ihe ntinye aka na PFMs mee ihe, ebe mweghachi zirconia enwetabeghị ike a
· Enwere ike iji mweghachi PFM maka akwa mmiri dị ogologo ma gosipụta na ọ bụ nhọrọ ihe dị irè na ogologo oge
Nsogbu ndị nwere ike iji okpueze PFM
Ọ bụ ezie na ntụkwasị obi na nkwụsi ike nke PFM karịrị ajụjụ, ọ nwere ike isi ike ịmepụta nrụpụta esthetic dị ukwuu n'ihi ngwongwo ọla. Ihe odide ahụ ga-ekpuchi ya na opaque ma nwee ike ịpụta ntakịrị anya ọbụlagodi mgbe ị na-ete ya na poselin. Opaque na-egbochi ìhè ịgabiga site na mweghachi dị ka ọ ga-esi na ezé nkịtị. Nsogbu ọzọ enwere ike iweghachi na PFM bụ nlọghachi azụ. Ka oge na-aga, dị ka anụ ahụ chịngọm na-ala azụ, akụkụ ọla nke PFM gosipụtara, na -emepụta akara agba ntụ na-adịghị mma n'anya. Otu ụzọ isi merie nsogbu a bụ iji oke poselin, mana nke a nwere ike ọ gaghị abụ ụzọ ngwọta bara uru. A na-eji okpueze feldspathic kpoo okpueze PFM, nke bụ ihe na-esighi ike nke na-eyi ezé na-emegide ya na oke ọnụego. Nke a nwere ike ịbụ nsogbu mgbe ị na-eweghachi ezé na bruxers.
Gini mere iji choo ndi ozo Zirconia?
Mweghachi Zirconia na-enye ndị dọkịta ọtụtụ uru, na iwebata ihe ọhụụ na nke na-atọ ụtọ nke zirconia emeela ka arịrịọ ha dịkwuo ukwuu. Ọtụtụ ndị dọkịta na-ahọrọ i scanomi nkwadebe ezé kama ịnwe ihe ngosi dị egwu. Labolọ nyocha ahụike na-eji nyocha ahụ iji mepụta nrụpụta ziri ezi dị mfe.
Njirimara nke zirconia mweghachi:
· Ihe omuma na-enye ike di elu
· Nnukwu biocompatibility nke zirconia agaghị eme ka ndị na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa nfụkasị nke nrụghachi PFM
· Ha nwere nzaghachi anụ ahụ dị nro bara uru maka ndị ọrịa na-ata ahụhụ site na mkpasu iwe anụ ahụ nke PFM kpatara ma ọ bụ mweghachi ọla
· Mweghachi bụ nke dabara adaba, yabụ oke dị oke oke
· Ha dị mma maka mweghachi okpueze zuru oke ebe ihe ịchọ mma dị mkpa na mgbakwunye agbatị na nkwụsi ike chọrọ
· Ha na-eguzogide ọgwụ na-ekpo ọkụ na oyi, nke na-ebelata oke mmetụta
· Obere nkwadebe ezé chọrọ
· Zirconia siri ike kwesịrị ekwesị maka ndị na-akpụ akpụ n'ihi ike ya
· Ha nwere ike ikpuchi ihe na-eme ka ezé na-achagharị agbaze, ịkụnye ihe, na ihe igwe
· Ọchịkọta chịngọm agaghị emetụta esthetics, ma a ga-ezere njedebe dị n'akụkụ
Ntụle mgbe ị na-eji Mweghachi Zirconia
Zirconia bu ihe ohuru ohuru ma emeela ka ihe omumu banyere ihe kariri ogologo oge ya, mana iwebata uzo ohuru nke zirconia kpochapu otutu nchegbu ndi dibia ghaworo n'oge gara aga. Na mbụ, ụdị mbụ nke zirconia enweghị translucency nke lithium disilicate mweghachi. Site n'iji ya tụnyere, zirconia nke oge a nwere ike ịmepụta mwepụta kachasị ndụ, na ike ya na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ kachasị elu n'ọtụtụ ọnọdụ. Okwesiri maka mweghachi nke ihu na nke azụ na ebe esthetics bụ nchegbu kachasị.
Otu nchegbu bụ na ogologo oge nke ihe a na-eme ka o sie ike ịchọpụta mmebi dị n'okpuru okpueze, mana mweghachi bụ nkenke-eji teknụzụ CADCAM mee.,na-ebelata ohere nke ibute ọrịa.
N'oge gara aga, ndị dọkịta na-ajụ ma porcelains ndị a na-eji akwa zirconia eme ihe na-adị mfe. Ihe egwu maka chipping gụnyere bruxism na ileghara iyi nche abalị. Ntughari nke zirconia nke siri ike na-adighi nma nke ndi bruxers ekwuwaala banyere nchegbu ndi a. N'ezie, zirconia siri ike bụ nhọrọ kachasị mma maka ndị na-eme ihe ike karịa PFMs.
Ka ọ dị ugbu a, ihe akaebe gbasara ahụike maka ogologo ndụ ogologo oge nke mweghachi ndị metụtara zirconia dị ezigbo mma, ọ bụ ezie iwebata ihe ndị nwere teknụzụ dị elu nke teknụzụ n'ime afọ ole na ole gara aga emeela ka o sie ike nyocha nke ọma. Ọmụmụ ihe n'ọdịnihu nwere ike igosi na ụdị ọhụụ ndị a nke zirconia na-arụpụta ọmarịcha nsonaazụ ogologo oge. Ndị ọrịa na-achọwanye mweghachi ndị na-eme ka ọ dịkwuo mma, ọ dịkwa mfe ịnabata ihe ndị a mgbe ha na-eji zirconia.
PREV: Etu ịhọrọ igwe nyocha ụlọ nyocha
OSOTE : Vsimle igwe Bur Nwụnye Atụmatụ
Umu Obiligbo - Egwu Ebubedike